आफ्नै अनुभूतिहरुसँग डुबुल्की मार्दै
कोरोनाले उदांगिएको विश्व
कोरोनाको कहरले संसार त्रस्त छ । मानिसहरु आक्रान्त छन् । SARS-CoV-2 नामको यो भाइरस (विषाणु) द्वारा दिनहुँ हजारौं व्यक्ति संक्रमित भैरहेका छन् । हजारौंको मृत्यु भैरहेको छ । छिट्टै संक्रमण दर दैनिकनै लाखौं पुग्ने छाँट देखिदैं छ, शायद मृत्यु दर पनि । हालसम्म विश्वका २०४ देश तथा सीमामा फैलिसकेको कोभिड १९ नामको यो महामारीलाई प्रकृति र मानवबीचको विश्वयुद्दको रुपमा पनि ब्याख्या गर्न सकिन्छ । विश्व अर्थव्यबस्था नै ठप्प पारेको कोरोनाको यो विश्वव्यापी महामारीले देश र दुनियाँका अर्थतन्त्र लगायतका धेरै क्षेत्रलाई नंग्याइदिएको छ, उदांगो पारिदिएको छ ।
कोरोना भाइरसलाई बेवास्ता गर्नेमा अग्रस्थानमा आउँछन् - अमेरिकी रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । नोवेम्बरमा हुने रास्ट्रपति निर्वाचनको मुडमा पुगिसकेका उनले सुरुमा कोरोना भाइरस हल्ला भएको र गर्मी लागेपछि आफै जादुजस्तै हराउँछ, बिलाउँछ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिए । संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सबै कुरा आफ्नो नियन्त्रणमा भएको बताए । संक्रमितको संख्या हजारौं पुगेपछि कोभिड १९ लाई महामारीको रूपमा स्वीकार गरे र देशमा संकटकाल घोषणा गरे । अहिले अमेरिका संसारमै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित हुने देश बनेपछि उनी मृतकको संख्या १ लाखमा रोक्न सके त्यो आफ्नो सफलता हुने बताइरहेका छन् । यस्तै बेवास्ताका कारण इटाली, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत लगायतका युरोपेली देशहरूले अहिले मृत्युको त्रासदी बेहोर्नु परिरहेकोे छ ।
अझ केही त्यस्ता देशहरु छन् जसले आजसम्म कोभिड १९ लाई गम्भीरतापुर्वक लिएका छैनन् । बेलारुसका रास्ट्रपति अलेक्जेण्डर लुकाशेन्कोले कोरोना भाइरसलाई पागलपनको संज्ञा दिइरहेका छन् । छिमेकी देशहरू युक्रेन, पोलेन्ड, रसिया, लात्भिया, लिथुआनियाले सबै यातायात र सिमाना बन्द गर्नुलाई मुर्खता भन्दै उनी जनतालाई काममा जान, साउना जान र भोड्का खान भनिरहेका छन् । ब्राजिलका रास्ट्रपति जायर बोल्सोनारो कोरोना भाइरसलाई मिडियाको हौवा बताउँछन् । यस्तो सानोतिनो रुघाखोकीले केहि नहुने भन्दै उनी ब्राजिलियनहरु नालीमा पौडी खेलेर पनि बिरामी नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । ईरान, चीन र रसिया जस्ता देशहरुले संक्रमित तथा मृतकको संख्या लुकाइराखेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यसरी आजको विश्व प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्धमाझैं आफ्नो क्षणिक हितलाई महत्त्व दिने, अदुरदर्शि, पपुलिस्ट, रास्ट्रवादीहरुको नेतृत्वमा पुगेको प्रष्ट भएको छ । यति सम्वेदनाहीन हातहरुमा पुगेको विश्वले त्यसको कस्तो मुल्य चुकाउनु पर्ने हो, त्यो समयक्रम संगै प्रष्ट हुँदै जानेछ ।
बिश्वका कुनै पनि देश बिश्वब्यापी महामारी नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्यमा छैनन् भन्ने भन्ने कुरा कोभिड १९ महामारीले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । WHO को Health System Performance अध्ययनको पहिलो स्थानमा रहेको फ्रान्स र दोस्रो स्थानमा रहेको इटालीनै अहिले कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त हुने देशको सूचीमा अग्रस्थानमा छन् । संसारकै उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा भएका स्पेन, जर्मनी, बेलायत जस्ता युरोपेली देशहरुको अवस्था उत्तिकै नाजुक छ ।
यसले प्रशस्त स्वास्थ्य संस्था वा डाक्टर र बिरामीको अनुपात मात्र उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाको मानक हुन नसक्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । साथै उपचार भन्दा रोकथाम नै बढी प्रभावकारी हुने कुरा प्रष्ट भएको छ । चीन र कोरियाले यो कुरालाई प्रमाणित पनि गरिदिएका छन । चीनले प्रयोग गरेको लकडाउनको मोडल, जुन पहिले लोकतन्त्र र मानवअधिकारका दृस्टिले अनुचित भनी आलोचित भएको थियो, आज विश्वभरी प्रयोग भएको छ । र यो मोडल कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्ने एउटा मात्र उपाय सिद्ध भएको छ ।
कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीलाई प्रकृतिलाई सन्तुलित राख्ने प्रकृतिको एक प्राकृतिक प्रक्रियाको रूपमा पनि अर्थ्याउन सकिन्छ । सुरुवाती दिनहरुमा कोरोना भाइरसलाई चीनको प्रयोगशालाबाट फुत्केको जैविक हतियार भनेर ब्याख्या गरिएको थियो । तर यो कुरा असत्य प्रमाणित भैसकेको छ । अहिले उक्त भाइरस चमेरा, सालक जस्ता जीव जन्तुहरुबाट मान्छेमा सरेको हुन सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । जे भएपनि प्रकृति र मान्छेबीच हजारौं बर्षदेखी एउटा अघोषित द्वन्द चलिरहेकै छ । मानिसले पशुपन्छी माथि निर्मम प्रहार गरेकै छ । वातावरणमा बिनाशलीला मच्चाएकै छ । भनिन्छ मानव जातिको अस्तित्व पृथ्वीमा नहुने हो भने प्रकृति फस्टाउँछ भने अन्य पशुपन्छी तथा बनस्पति नहुने हो भने प्रकृति क्षणभरमै अस्ताउँछ । यस अर्थमा मानिस आफै पनि प्रकृतिको लागि भाइरस हो । फलतः हामी आफ्नै कुकृत्यको कारण प्रकृतिले समय समयमा मच्चाउँदै आएको तान्ड्वको प्रकोप सहन गर्न बाध्य छौं । कोभिड १९ को रुपमा आज हामी प्रकृतिको सामुन्ने निरीह बनेका छौं । घरमै थुनिनुपर्दा हामीले पशुपन्छीले चिडियाघरमा कस्तो महसुस गरिरहेका होलान भन्ने कुरा अनुभुत गरेका छौँ । प्रकृतिले मानिसको आर्थिक सामाजिक अवस्था वा जाति वा वर्णको आधारमा भेदभाव नगरी प्रहार गरेको छ । र प्रकृतिले निश्पाप बालबालिकाहरुलाई बिशिस्ट स्थानमा राखेको छ भन्ने कुराको बोध पनि हामीलाई भएको छ । यसले प्रकृतिसामु मानिसको केही जोर नचल्ने र प्रकृति सदैब मानवजाति भन्दा बलवान भएको पुष्टि भएको छ ।
विकसित देशहरूको विकास र समृद्धिको कारक उनीहरुको सभ्यता र अनुशासनलाई मानिदै आइएको थियो । तर उनीहरु सभ्य र सुसंस्कृत हुन्छन् भन्ने हाम्रो धारणा कोभिड १९ को प्रकोपले गलत साबित गरिदिएको छ । लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको नाममा सरकारी लकडाउनलाई अवज्ञा गर्नेहरुको कारण नै युरोप र अमेरिका महामारीको यो भयानक दलदलमा फसेको देखिन्छ । अझ लकडाउनहरुको घोषणा भएपश्चात खाद्यान्न देखि ट्वाइलेट पेपर सम्म थुपार्ने होडबाजीले उनीहरुको चेतनाको स्तर पनि संसार सामु उदांगो भएको छ ।
अर्को तर्फ पुर्वीय दर्शनका कतिपय मान्यता तथा अभ्यासले यो प्रकोप पश्चात् विश्वमा जबर्जस्त दबदबा बनाउने पक्का छ । यो महामारीले पुर्वीय संस्कृतिमा प्रचलित “नमस्कार“ लाई विश्वमा अभिवादनको सबैभन्दा स्वस्थ्यकर र सुरक्षित तरिकाको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ। पुर्वीय दर्शनको जीवन पद्धतिको रूपमा रहेको योगा अहिले विश्वले आत्मसात गरिसकेको छ र विगत ५ वर्ष यता बिश्वले योगा दिवस पनि मनाउँदै आएको छ । यो महामारी पश्चात पुर्वीय दर्शन र विशेष गरि हिन्दु धर्म संस्कृतिप्रति पश्चिमी समाजको रुचि तथा अध्ययन अन्वेषणमा बढोत्तरी हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
शक्ति संरचनामा परिवर्तन ?
के शक्तिको मानक सैन्य क्षमता मात्र हो त? यसमा संकट ब्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताले कति महत्त्व राख्दछ ? विश्वको सर्वशक्तिमान रास्ट्र अमेरिका यो प्रकोपबाट सबैभन्दा आहात हुने देखिएको छ । धर्तीको स्वर्ग मानिएको अमेरिकाको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुने देखिन्छ । यो घटनापश्चात अमेरिकाले संसारमा सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र वा सैन्य शक्तिको रूपमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राखिराख्न सक्ला ?
उता चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाको संक्रमणबाट चीन भने सामान्य अवस्था तर्फ फर्कदै छ । कोरोनाबाट आक्रान्त मुलुकहरु चीनको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । र चीनले सबैतिर सहयोगको हात अघि बढाइरहेको पनि देखिन्छ । भनिन्छ ‘संकट व्यवस्थापन नै व्यबस्थापकीय सफलताको चुरो हो ।‘ चीन यो संकटको बुद्दिमततापुर्वक व्यबस्थापन गरेर विश्वमा नयाँ सुपरपावरको रुपमा उदाएको हो त ?
ढिलोचाडो कोरोना विरुद्धको युद्धमा सफलता प्राप्त गर्न त सकिएला नै तर आज सबै क्षेत्रमा उदाङिएको विश्वसामु अनेक प्रश्न उब्जेका छन् । के विश्वको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था मानिएको लोकतन्त्र निरपेक्ष हुन्छ ? के हाम्रा विकासका मोडलहरु सहि छन् ? कृषिको विकासबिना अर्थतन्त्रको दिगोपना सम्भव छ ? के हाम्रो औधोगिकिकरण र शहरीकरणका मोडलहरु दीगो प्रकृतिका छन् ? कतै हामी बिज्ञान प्रविधि भन्दा बढी खेलकुदमा लगानी गरिरहेका त छैनौं ? के स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा हामी सहि दिशामा अघि बढिरहेका छौं ? सम्भवतः यो महामारीको अन्त्य पश्चात यी प्रश्नहरुको उत्तर खोजिनेछ । तर एउटा कुरा भने अवश्यम्भावी छ- कोभिड १९ महामारीले विश्व इतिहासमा प्रथम विश्व युद्ध, १९२८ को आर्थिक मन्दी, दोस्रो विश्वयुद्ध र शीत युद्धझैं विश्वमा थुप्रै मान्यता तथा सिद्धान्तहरु स्थापित गरेर भने पक्कै जानेछ ।
यो लेख सम्पादन सहित सर्वप्रथम पहिलोपोस्टमा प्रकाशित भएको थियो ।
Posted by Kanchan Raj Giri at 11:21 AM
Kanchan Raj Giri
छड्के: यथार्थ र भ्रम
छड्के : यथार्थ र भ्रम छड्के ' टाइटल ' : प्रोमोमा मान्छेले देखे- यो ' ग्यांगस्टर ' फिल्म हो। सोचे - ग्यांग फाइट ,...
पशुपति शर्माले गीतमा उठाएका प्रश्न: हाम्रा पनि प्रश्न हुन् । प्रिय प्रधानमन्त्रीमन्त्रीज्यु , नमस्कार ! सरकार गठनको १०० दि...
म विदेश जान्न ।
केही वर्ष पहिले विदेश, त्यसमा पनि अमेरिका जाने खुबै हुटहुटि थियो ममा । नेपालमा बस्यो भने त जीवननै सकिन्छ कि भनेझैं लाग्थ्यो । डिभी पनि ...
शिव-लिङ्ग शिव-लिङ्गको कथा अनादी कालमा हिमालयको जंगलमा निर्वस्त्र तान्डव नृत्य गरिरहेका देवादी देव महादेवलाई देखेर ...
नयाँ महाराज र गान्धी
डेनिस लेखक ह्यान्स क्रिस्टियन एनडरसन्को एउटा कथा चर्चित छ- ‘महाराजको नयाँ पोशाक’ । कथामा दुई सुचीकारले सम्राटलाई एउटा यस्तो पोशाकको वाचा ...
अब त सोचौं ।
फेरी चुनाब आएको छ । फेरी थरीथरीका विकासे नारा बोकेर नेताहरु हाम्रा गाउँ बस्तीमा पसेका छन् । फेरी नयाँ पूराना प्रतिबद्धताका ठेलीहरु बोकेर ...
लस्ट इन शिवपुरी - १
हामी ८ घन्टामा २० किलोमिटर हिंडिसकेका थियौं । खुट्टा बेस्मारी दुख्न थालिसकेका थिए । अब हामी बिष्णुद्वारको खोजमा निस्केका थि...
दामन.....द म्युजिकल जर्नी (२)
म त भुइँमै सुत्दिन्छु.......... ! Simple living, high drinking……….!! दुइजना साथीहरु बिहान-बिहानै उठेर हल्ला मच्चाइरहेका थिए ....
शीर्षक त शायद अरु कसैले लेखिसकेको हुनुपर्छ तर म यहाँ आफ्नो कथा लेख्दै छु ! प्रत्येक वर्ष दशैं यसरी नै आउँछ , जान्छ । हामी संधै यही गु...